I-Beachside Condo ene-balcony
Indawo yam isondele kwiimbono ezintle. Ulwandle lwaseCarita lune-2km yesanti elungileyo, imithi enomthunzi, iikhefi, amabala emidlalo yasemanzini kunye nokuthenga ngaselwandle. Kufuphi unokufumana intlanzi ene-barbequed ngqo kwizikhephe zokuloba. Uhambo oluya eKrakatau, Tanjung Lesung, Pulau Umang, Ujung Kulon, Karang Bolong kunye neengxangxasi zendawo njl.
I-condo ineebhedi zabantu abasibhozo, kukho intlawulo eyongezelelweyo ye-IDR100k / ubusuku kumntu ngamnye owongezelelweyo ngaphezu kwe-8 - ubuninzi be-12.
Ukutya endikuthandayo ziintlanzi ezibhayiweyo ngokuthe ngqo kwizikhephe zokuloba kwindawo yokungena ekufutshane. Zama kwakhona iikhokhonathi kunye nebhanana eqhotsiweyo elunxwemeni. Ukuba ufuna iidolophu, iLabuan imalunga nemizuzu engama-20 kude. I-Carita ine-'Pantai' yokuthenga kunye nokutya kwasekhaya. Kukwakho neehotele kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide phezulu nasezantsi elunxwemeni ezibonelela ngeendlela zokutya ezixabisa kakhulu.
Umncedisi wegumbi lethu uzakudibana nawe akunike isitshixo